February 2017 - Page 30 of 31 - Sawirrotv
Dagaalyahano ka Tirsan Al Shabaab oo Xalay Weerar Culus ka Geystay Gudaha Dalka Kenya (VIDEO)
February 02, 2017 – Dagaalyahanno taabacsan Ururka Al Shabaab ayaa saqdii dhexe ee xalay waxa ay weerar ballaaran ku qaaday Deegaanka Carabiya, oo ka tirsan Degmada Mandheera ee Gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Dagaalyahanadan Shabaabka, ayaa waxaa la soo sheegayaa in dhawr jiho ay ka soo weerareen Deegaanka Carabiya, iyagoona halkaasi dagaal kula galay Ciidamadii …
Weerarkii Shabaab ee Gudaha Kenya (VIDEO)
Dagaalyahanadan Shabaabka, ayaa waxaa la soo sheegayaa in dhawr jiho ay ka soo weerareen Deegaanka Carabiya, iyagoona halkaasi dagaal kula galay Ciidamadii Booliska ee ka hawlgalaayay deegaankaasi. VIDEO – 1 VIDEO – 2 Dagaalyahanada Al Shabaab ayaa la sheegayaa inay saacado haysteen deegaanka Carabiya, waxayna markii dambe si iskooda ah uga baxeen degmrdaasi, waxayna horey …
Weerar Dad ay ku Dhinteen oo Xalay ka Dhacay Magaalada Boosaaso
February 02, 2017 – Waxaa Magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee Puntland xalay ka dhacay iska horimaad hubeysan, kaasi oo ay ku dhinteen laba qof, halka laba kalana ay ku dhaawacmeen. Iska horimaadkan ayaa wuxuu ka dambeeyay kadib markii dabley hubeysani ay soo weerartay bar kontorool, oo Ciidamada Puntland ay ku leeyihiin dhinaca koonfureed ee …
Baafin Yaab Leh oo Maanta Laga Tabiyay Warbaahinta Magaalada Muqdisho (Dhagayso)
February 01, 2017 – Warbaahinta Magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta wax ka Baafiyay nin lagu magacaabo C/qaadir Maxamad Xuseen Guulled oo ah nin 31 sano jir ah oo noloshiisa oo dhan isku heystay inuu yahay Itoobiyaan, laakiin markii danbe ogaaday inuu yahay Muwaadin Soomaali ah. Ninkan ayaa lasoo xariiray Idaacad ka midah idaacadaha magaalada Muqdisho, una …
Shabaab oo soo Bandhigay Sawirro Horleh ee Dagaalkii Kulbiyoow (SAWIRRO)
February 01, 2017 – Weerarkii aroortii Jimcaha ay dagaalyahanada Al Shabaab ku qaadeen Xerada Ciidamada Kenya ay ku lahaayeen Deegaanka Kulbiyoow ee Gobolka Jubada hoose, ayaa waxaa ka soo baxaya Sawirro horleh oo muujinaya sidii ay wax u dhaceen. Dagaalyahanada Shabaabka ayaa markani soo bandhigay gawaarida iyo hubka ay ka qaateen Xerada saldhiga u ahayd militeriga …
SAWIRRO – Qaybtii 2-aad Weerarkii Kulbiyoow
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda geerida ciidankooda ay gaarayso ilaa 9 dhimasho ah iyo 15 dhaawac ah, waxaana dowladda Kenya ay Wargaysyada ka mamnuucday inay daabacaan Sawirro cabsi ku abuuri kara shacabka dalkaasi iyo sawirro niyad jabin kara ciidamada militeriga.
Muranka Badda Soomaaliya iyo Kenya, Maxay Noqon Doontaa Warbixinta ay Beri Shaacin Doonto Maxkamada ICJ?
February 01, 2017 – Muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya waa mid aad u muhiim ah. Waxay labada dal isku haystaan bad uu bedkeedu yahay 142,000 km oo laba jibbaaran. Waa bed ka baaxad weyn dhulka Somaliland oo dhan. Waxaana la rumeysan yahay aagga badweynta India ee ay Soomaaliya iyo Kenya ay lahaashaheeda ku muransan …